Iibhasikiti zenhlama ye-Ista Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
Iibhasikiti zenhlama ye-Ista
19.03.2014 Ithunyelwe ngu: Izixhobo zobugcisa
Imibono yasekhaya, Iresiphi, Iindlela zokupheka ze-Ista
Iibhasikiti ezenziwe ngentlama ziyindlela ekhangayo kwaye intle yokukhonza amaqanda namaqanda ama-Ista. Ukuhonjiswa okumangalisayo kwetafile yemibhiyozo, apho unokusebenzela khona isaladi, ii-appetizer, izitya ezahlukeneyo.
Ukuluka ibhasikithi yinkqubo ekunzima ukuyenza, kodwa ilunge kakhulu kwi-Ista kunye nokucwangcisa amaqanda ahlotshiswe. Zininzi iindlela zokwenza, kodwa ngokusisiseko zonke zixhomekeke kubume benye inqanawa.
-Inhlama ekhethiweyo-ngokomgaqo, iisosi zilungile ngakumbi njengoko zingafakwisi kakhulu xa kubhaka, kodwa oku kuyasebenza nakwezinye izinhlama zebhotile yebhotile kwaye ezinye zityala ipizzas.
Isixhobo esirhuqayo esiya kuyila iingobozi.
- Amafutha-nayiphi na imifuno okanye isilwanyana ifanelekile.
-Iqanda elaphukileyo neetispuni ezimbini amanzi-okusasazeka.
- I-foil yeAluminiyam okanye iphepha lokubhaka, ngokuxhomekeka ekubeni inqobo yomgubo ayinakuba ngqo epanini.
- Iindlela zokubambisa ukuba ukhusele ezinye iintlobo zekhephu kunye nesiphatho, ukuba ulungiselele.
Qengqa uxande lobunzima obufunayo kwaye usike imitya efanelekileyo. Jika ipani yokuhombisa elapha ngasentla, gquma nge-foil okanye ngephepha njengoko kufuneka kwaye gcoba wonke umhlaba ngobunono. Imitya ebunjiweyo yenhlama kwisiseko esigciniweyo kusetyenziswa indlela ekhethiweyo, usike ngononophelo imiphetho engeyomfuneko ongaphinda uyiqhekeze. Bambelela ngoxinzelelo, kwaye ukuba akonelanga, khuseleka ngamazinyo. Ungafaka nedosi yokweyama ngokusika iimilo zepasta (umzekelo, okwenziwe ngamagqabi). Xa ipani yonke igutyungelwe, cinezela phezulu, okt. kumazantsi ezantsi ukuba ibe nkqu, kroba iqanda elibethayo kwaye ubeke kwindawo yangaphambi kokuba yi-180 ° C ukuya kwi-220 ° C (kuxhomekeke kwinhlama) ehovini. Bhaka kude kube nsundu yegolide. Ukuba uyathanda, cwangcisa kwaye ubeke isiphatho sebhasikiti ngokufana. Ikhuselwe ngoncedo lwamazinyo xa ibhaskiti iphola. Oku kunzima ngakumbi kunye nenhlama ye-soda. Ukufumana kwisiseko, vumela ukupholile kwaye ulungele ukumangaliswa kweholide. Ukuba awucwangcisanga kukhonza ngaphakathi kweeyure ze-24, emva kokuphola, kufuneka ubeke ibhasikithi kwimvulophu.
ulungiselelo, Ingobozi yeIsta, Iibhasikithi zeIsta, Iibhasikiti zenhlama ye-Ista, izimvo, izimvo zekhaya, umbono weIsta, ibhasikithi, Iibhasikithi zeIsta, iibhasikiti zenhlama, iingobozi zeqanda, iingobozi eziphekiweyo, Iresiphi ye-Ista, iresiphi yebhasikiti, zokupheka, zokupheka inhlama, izimvo zekhaya, uyilo lwangaphakathi, ifanitshala, izimvo zangaphakathi, Yila izimvo, ikhaya lanamhlanje, ukuhombisa izimvo, izimvo zobugcisa
Umbane yinxalenye ebalulekileyo yangaphakathi. Ukusuka ukhetho olufanelekileyo lwee-luminaires kunye nabo ...
Ukunyuka kunye nesitayile kwigumbi lokuhlala
Ngubani ongakufuniyo ukuhlala kwikhaya elihle nelicocwe kakuhle? Uyilo olungezantsi ...
Zenzele umthi omncinci weKrisimesi
Umthi weKrisimesi yinxalenye yomfuziselo weKrisimesi, kodwa asisoloko sinamathuba ...
Iiholide ezimnandi kakhulu zonyaka zizayo. Iintsuku ezizodwa apho imihla elungileyo ...
Ukuhlakulela iitapile kwiingxowa kunye neembiza
Ukulinywa kwamazambane kwiingxowa kunye neembiza yindlela efanelekileyo yokwenza iimveliso ...
Yenza ukuzimela kwegadi yokuntywila
Ukuba une reel enkulu ongayidingiyo kwaye awunayo igadi esinki oyifunayo, le ene ...
Iingcinga zegumbi lokuhlala elincinci
Iimbono ezivezwe apha zezokuyileka kwigumbi lokuhlala elincinci elijikeleze isikwere se17-20. Ithambile kwaye iphakamileyo ...
Khangela kugcino - Khetha inyanga - NgoJanuwari 2020 NgoDisemba 2019 NgoNovemba 2019 Ngo-Oktobha 2019 NgoSeptemba 2019 Nge-Agasti 2019 NgoJulayi 2019 NgoJuni 2019 Ngamana i-2019 Epreli 2019 NgoMatshi 2019 NgoFebruwari 2019 NgoJanuwari 2019 NgoDisemba 2018 Ngo-Oktobha 2018 NgoSeptemba 2018 Nge-Agasti 2018 NgoJulayi 2018 NgoJuni 2018 Ngamana i-2018 Epreli 2018 NgoMatshi 2018 NgoFebruwari 2018 NgoJanuwari 2018 NgoDisemba 2017 NgoNovemba 2017 Ngo-Oktobha 2017 NgoSeptemba 2017 Nge-Agasti 2017 NgoJulayi 2017 NgoJuni 2017 Ngamana i-2017 Epreli 2017 NgoMatshi 2017 NgoNovemba 2016 NgoJulayi 2016 NgoJuni 2016 Ngamana i-2016 Epreli 2016 NgoMatshi 2016 NgoJanuwari 2016 NgoDisemba 2015 NgoNovemba 2015 Ngo-Oktobha 2015 NgoSeptemba 2015 Nge-Agasti 2015 NgoJulayi 2015 NgoJuni 2015 Ngamana i-2015 Epreli 2015 NgoMatshi 2015 NgoFebruwari 2015 NgoJanuwari 2015 NgoDisemba 2014 NgoNovemba 2014 Ngo-Oktobha 2014 NgoSeptemba 2014 Nge-Agasti 2014 NgoJulayi 2014 NgoJuni 2014 Ngamana i-2014 Epreli 2014 NgoMatshi 2014 NgoFebruwari 2014 NgoJanuwari 2014 NgoDisemba 2013 NgoNovemba 2013 Ngo-Oktobha 2013 NgoSeptemba 2013 Nge-Agasti 2013 NgoJuni 2013 Ngamana i-2013 Epreli 2013 NgoMatshi 2013 NgoFebruwari 2013 NgoJanuwari 2013 NgoDisemba 2012 NgoNovemba 2012 Ngo-Oktobha 2012 NgoSeptemba 2012 Nge-Agasti 2012 NgoJulayi 2012 NgoJuni 2012 Ngamana i-2012 Epreli 2012 NgoMatshi 2012